လူကြီးမင်းရဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် ကိုယ်ပိုင်
FullStack E-Commerce တစ်ခုကို
မြန်မာနိုင်ငံရှိ Store/Brand ပိုင်ရှင်များအတွက်
သင့်လျော်သော E-Commerce Enabler Service
Digi-Zaay E-commerce မှာ
Chatbot ကနေလည်း Order များ
Bot တွေက ဝင်လာတဲ့ Order တွေကို Mobile Apps နဲ့ Website က ဝင်လာတဲ့ Order
တွေလိုပဲ Dashboard တစ်ခုတည်းကနေ Process ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Bot တွေက ဝင်လာတဲ့ Order တွေကို
Mobile Apps နဲ့ Website က ဝင်လာတဲ့ Order တွေလိုပဲ
Dashboard တစ်ခုတည်းကနေ Process ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook Shop ကနေလည်း
Facebook Shop က ရောင်းချတဲ့ Product တွေကို Messenger,
Facebook, Instagram တို့အပြင် ကိုယ်ပိုင် Website နဲ့လည်း
ချိတ်ဆက်ပြီး Checkout ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Brand နဲ့
E-commerce App ကနေတစ်ဆင့်
Live Sale ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
March လအတွင်း Sign up လုပ်ပါက
Setup FeeFree$2000 OFF
Annual Fee200,000 MMK
လုပြီး Comment ရေးရတာတွေ
Order နဲ့ ဝယ်သူနဲ့ မှားမှတ်မိတာတွေ
ဝယ်မယ့်လူကို CB လာခိုင်းနေရတာတွေ
Digi-Zaayဟာ နည်းပညာတွေပိုမိုတိုးတက်နေတဲ့ကာလမှာ Brand Owner တွေ ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုတဲ့ ဆိုင်ရှင်တွေအတွက် Full-Stack E-Commerce တစ်ခုကို (၂)ပတ်အတွင်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ အစအဆုံး တာဝန်ယူစီစဥ်ပေးတဲ့ Service Package ဖြစ်ပါတယ် ။ Digi-Zaay ကို Software Solution Provider အဖြစ် လုပ်ငန်းပေါင်း (၃၀)ကျော်ကို Service ပေးခဲ့တဲ့MM Digital Solutionsက တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Challenges You Will Face Without Proper E-Commerce
ဘယ် Product အမျိုးအစားတွေက ဘယ်လောက် ရောင်းအားကောင်းတယ် ၊ ဘယ်တော့လောက် ပြန်ပြီး Restock လုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုတာကို အလွယ်တကူ မသိနိုင်ခြင်း။
Unknown Buyers & Their Interest
ဝယ်သူတွေက ကိုယ်ပိုင် Website ကရော Mobile App ကနေတဆင့်ပါ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ E-Commerce တစ်ခုရှိနေတဲ့ Brand တွေကို ပိုပြီး တန်ဖိုး ရှိတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ် ။
ကိုယ့်ဆီမှာ ဝယ်လေ့ရှိတဲ့ Customer တွေကို သိနေဖို့နဲ့ နောက်ထပ် ပိုပိုပြီး ဝယ်ချင်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့က တော်တော်လေးကို အရေးကြီးပါတယ်
ကိုယ်ပိုင် Brand တည်ဆောက်ခြင်း
ဆိုင်ရှင်တွေအနေဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့အားစိုက်မှုများစွာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများစွာနဲ့ တည်ဆောက်ထားရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဟာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွေမှာ ဝယ်လိုအားတွေ ကျဆင်းမှုကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးလား ???
Building Reputation with Genuine Feedbacks
ကိုယ့်ဆီမှာ ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်ဖူးသူတိုင်းကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး သူတို့ဆီက Genuine Feedback တွေ စုဆောင်းထားခြင်းဟာ ကိုယ့်ဆီမှာ မဝယ်ဖူးသေးသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်းပါပဲ။
DIGI-ZAAY SOLVES ALL THOSE
ကိုယ်ရောင်းချတဲ့ Product တွေကို Hierarchical ရော Non-Hierarchical အရပါ Categorizing ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Category တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ရောင်းအားနဲ့ ဝယ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုနှုန်းကိုလည်း မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နိုင်စေပါမယ်။
Product တစ်ခုချင်းစီရဲ့ Reorder Threshold ကို Hit ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ သိနိုင်စေဖို့ ၊ Category တစ်ခုချင်းစီအလိုက် Overall / Average Inventory ပမာဏတွေကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်စေဖို့ကိုလည်း တာဝန်ယူပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Collect Real Customer Insights
ဝယ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ၊ Search လုပ်လေ့ရှိတဲ့ Pattern နဲ့ Overall Behavior က ကိုယ့်ဆီက ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာတွေကို သိထားတာကလဲ အရေးပါတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူ ပေးပါလိမ့်မယ်။
Trigger your 1st Sale
ကိုယ့် E-Commerce Platform ပေါ်ရောက်လာတဲ့ User အမျိုးအစား တစ်ခုချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီး ပထမဦးဆုံး ဝယ်ယူမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ဖြစ်သွားစေဖို့ ဘယ်လို Drive မျိုးတွေ Setup လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုပါ Explore ပြုလုပ်နိုင်စေပါမယ်။
Manage Customer Loyalty
မိမိကုန်ပစ္စည်းအား ဝယ်ယူအားပေးသော Customer များနှင့် ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေစေနိုင်မယ့်အပြင် ရောင်းလိုအားကို ရေရှည်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ့် Loyalty Program များ Set-Up လုပ်နိုင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းကို ဝယ်ယူတိုင်း (ဝယ်ယူတိုင်း) Point များ ရရှိနေစေဖို့ကိုပါ စီစဥ်ပေးထားနိုင်မယ် ။
Your Fullstack Digital Store-Front
ကိုယ်ရောင်းချတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို Website အားသာတဲ့ User တွေက Website က ဝယ်ယူနိုင်ပြီး Mobile App အားသာတဲ့လူက Mobile App ကနေ ဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Page မှာ လာ Chat ပြီး ဝယ်ယူရတာကို အားသန်တဲ့သူတွေကို ရောင်းချပေးနိုင်ဖို့အတွက် Fully Functional ChatBot ကိုလည်း စီစဥ်ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
Setup e-Commerce Store-front with affortable price
Digi-Zaay ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ Beta အဆင့် စတင်အသုံးပြုလိုပါက ကိုယ်ပိုင် Full-Stack E-Commerce အနေနှင့် (၁)လစာ အခမဲ့စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ Digi-Zaay ကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုလိုပါက (၁)နှစ်စာကို ဒေါ်လာ(၁၅၀၀) သာကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး ၊ One-Time Set-Up Fee အနေနဲ့ ဒေါ်လာ(၂၀၀၀) ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
E-Commerce Solution Provider တွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ် စီစစ်လေ့လာရွေးချယ်သင့်ပါတယ်
Digi-Zaay က အာမခံနိုင်တာကတော့
စနစ်ကျတဲ့ Fullstack E-Commerce System တစ်ခုနဲ့ Technical Foundation တစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့
ရောင်းချနေတဲ့ Product တွေနဲ့ Category တွေနဲ့ Inventory နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ Insight တွေကို အလွယ်တကူ ရရှိစေဖို့
ကိုယ့် Platform ပေါ်ရောက်လာတဲ့ Customer တွေရဲ့ Behavior ကို ပိုမိုသိရှိပြီး 1st Purchase ကနေ Subsequent Purchase တွေအထိ Trigger ပြုလုပ်နိုင်စေဖို့
တစ်ခါဝယ်ယူဖူးတဲ့ Customer တွေ ထပ်ခါထပ်ခါ ဝယ်ယူချင်လာဖို့ Loyalty Program တွေ တည်ဆောက်ပေးနိုင်စေဖို့
Platform တစ်ခုလုံးက ရရှိလာတဲ့ Data တွေကနေတစ်ဆင့် Business အတွက် အထောက်အကူပြုစေမဲ့ Insight တွေ ရရှိလာစေဖို့
They are happy with Digi-Zaay
Quality e-Mart Visit Store
"Quality e-mart" ကတော့ နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများနှင့် Energy Drink များ၊ အခြေခံဖြည့်စွက်စာများအားအစုံလင်ဆုံး ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေတဲ့ Best Grocery Store တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အဝယ်တော် Visit Store
“အဝယ်တော်” သည် လတ်ဆတ်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၊ အသီးအနှံများနှင့် နေ့စဉ်စားသုံးကုန်များကို အချိန်ကုန်သက်သာပြီး လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Online Marketplace တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ZayCar Visit Store
"စျေးကား" ဆိုတာ နေ့စဉ်စားသုံးကုန်တွေ၊ အသီးအနှံလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကို အချိန်ကုန်စရာမလိုပဲ အိမ်အရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Online Market တစ်ခုပါ။ လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အမြဲပေးလျက်ရှိပါတယ်။
HOB Visit Store
"House of Bread" သည် ပြင်သစ်နည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့် နဲ့ သွားရေစာမုန့်တွေကို လွယ်ကူစွာ မှာယူနိုင်ဖို့အတွက် ပြုလုပ်ထားတဲ့ Bakery Store တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
JOLLY Visit Store
"Jolly" ဆိုတာ အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကအစ၊ တိုင်းရင်းဆေးတွေ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး ကျန်းမာရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆေး၊ဆေးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တစ်နေရာတည်းနဲ့ အသက်သာဆုံး ဝယ်ယူရနိုင်တဲ့ Medical Store တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
CarsNET Visit Store
“CarsNET” သည် USED (Second Hand) Car များ ရောင်းသူနှင့် ဝယ်သူများအကြား ချိတ်ဆက်ရာတွင် အဆင်ပြေမှုရှိစေရန် ၊ ပြေပြေလည်လည် ရောင်းထွက်နိုင်စေရန် ကြော်ငြာပေးနေသော Car ကွန်ယက်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။
UKK Longyi Visit Store
"UKK Longyi" ဆိုတာ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်အနေနဲ့ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပြည်တွင်းဖြစ်အမျိုးသာ၊အမျိုးသမီးဝတ် လုံချည်များကို အဓိက ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေတဲ့ Clothing Store တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
How to get the Digi-Zaay Service Packages
သင့်ရဲ့ဆိုင်အကြောင်း သို့မဟုတ် အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းကို ပြောပြပါ။
Digi-Zaay ရဲ့ Beta Program ကိုစမ်းသုံးကြည့်ပါ။
လုပ်ငန်းအရ Digi-Zaay package ကို customized လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင် သင့်အနေနဲ့ customized လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် theme တစ်ခုရွေးချယ်နိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Digi-Zaay ရဲ့ Store Owner တွေ အောင်မြင်ပါမှ Digi-Zaay လဲ နှစ်စဥ် Subscription တွေကို Maintain ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Store Owner တွေ Digi-Zaay E-Commerce ပေါ်ကနေ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို အမှန်တကယ် ရောင်းချနိုင်ဖို့ အတွက်ကို အမှန်တကယ် အထူးအလေးထားပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် Digi-Zaay Store တွေအတွက် Feature အသစ်တွေ ထပ်တိုးတာမျိုးတွေ ၊ ရှိထားပြီးသား Feature တွေကို ပိုမိုအသုံးဝင်အောင် Polish ပြုလုပ်တာမျိုးတွေ ၊ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ User Interface တွေ အကောင်အထည်ဖော်တာမျိုးတွေကို စဥ်ဆက်မပျက် ပြုလုပ်နေမှာ ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး တစ်လကို တစ်ကြိမ် Version အသစ်ကို Release ပြုလုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Store Owner တွေဆီက ပိုက်ဆံ ရပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ အဆင်ပြေလား မပြေလား ဂရုမစိုက်တော့တာမျိုး ၊ System ရဲ့ ပြဿနာတိုင်းကို “User တွေက မသုံးတတ်လို့” တို့လို့ Excuse တွေ ပေးပြီး Store Owner ဆီက ပိုက်ဆံရဖို့ တစ်ခုကိုပဲ အာရုံထားတာမျိုးတွေ လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူးလို့ အာမခံပါတယ် ။
Digi-Zaay ရဲ့ Services တွေ အကုန်လုံးကို လုံးဝ(လုံးဝ) အခမဲ့တစ်လစာ စမ်းသပ် အသုံးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Digi-Zaay ရဲ့ Beta Program မှာတော့ Website + Dashboardအပြင် Mobile App များကိုပါ စမ်းသပ်သုံးစွဲသူ Brand အတွက် သီးသန့် setup လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Brand နဲ့ E-commerce တစ်ခုလုံးကို လစဉ်ကြေး ( ၂​ ) သိန်းကျပ်တည်း နဲ့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ့် အထူး အခွင့်အရေး ✨✨✨
လုပ်ငန်းရှင်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ ရောင်းချတာအပြင် Internet နဲ့ Social Media ကနေပါ ရောင်းဝယ်လာကြပါတယ်… ဒ...
ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဝယ်သူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို Digital Format အနေနဲ့ သိမ်းထားနိုင်ခြင်းက ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲ
E-commerce |2min read
ဆိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ ဝယ်သူတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို Digital Format အနေနဲ့ သိမ်းထားနိုင်ခြင်းက ဘယ်လိုအကျို...
(7) Loyalty Program တွေ ပြုလုပ်ပါ။
E-commerce |3min read
E-commerce | 1 min read
Shop.com.mm မှာ ရောင်းတာနဲ့ ဘာကွာမလဲ ?
ကိုယ်ပိုင်နာမည်နဲ့ E-Commerce ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ဖောက်သည်တွေက တစ်ခြားဆိုင်ရဲ့ အရောင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ အာရုံများမနေပဲ ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ကြည့်ရှုဝယ်ယူစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Store အတွက် Domain Fee, Server Fee တွေက ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲ ?
ဒါတွေကတော့ Store ပိုင်ရှင်က သီးသန့်ထပ်ပြီး ကျခံပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Server တစ်လုံးမှာ ဆိုင်ရှင်ရဲ့ E-Commerce System တစ်ခုတည်းကိုသာ run တဲ့ Dedicated Google Server ကို အသုံးပြုပေးထားမှာဖြစ်ပြီး Billing ကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးထားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့် E-Commerce ကို လာကြည့်တဲ့ User အနည်းအများအပေါ်မူတည်ပြီး တိုက်ရိုက်ပေးချေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Digi-Zaay အနေနဲ့ Domain Registration & Server Maintenance တွေမှာ အပြည့်အဝ Support ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဝယ်ယူမှုတွေက Payment တွေကို ဘယ်လိုလက်ခံနိုင်မှာလဲ ?
ကိုယ့် Bank Account ကို ပိုက်ဆံလွှဲပေးတဲ့ နည်းလမ်းကအစ Master / Visa Card တွေက Payment တွေကို လက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိ Option အပြည့်အစုံ Digi-Zaay မှာ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။
Store ရဲ့ UI/UX အပိုင်းတွေကို ကိုယ်လိုချင်သလို ပြင်လို့ရမှာလား ?
လက်ရှိရှိနေတဲ့ Theme တွေထဲက အနှစ်သက်ဆုံး Theme ကို အခမဲ့ ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး ထပ်မံ Customize ပြုလုပ်လိုတာတွေအတွက် အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်အောင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
E-Commerce လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ စနစ်ကျကျလည်ပတ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မှာလဲ ?
တစ်ယောက်ယောက်ကို အတည်တကျထားပြီး ကိုယ့်ဆိုင်ရဲ့ E-Commerce အပိုင်းကို အပြည့်အဝ လည်ပတ်စေနိုင်ဖို့ ဦးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Digi-Zaay ကလည်း သင်ကြားပေးဖို့ လိုအပ်သောအပိုင်းတွေအကုန်လုံးကို အပြည့်အဝ သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို ကူညီပေးဖို့ အချိန်ပြည့် အဆင်သင့်ရှိနေပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Admin Account အရေအတွက် ၊ Product အရေအတွက် ၊ SKU အရေအတွက်တို့အတွက် အကန့်အသတ်ရှိမှာလား ?
လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိပါဘူး ။ Admin တစ်ယောက်ချင်းစီက ဘယ်အပိုင်းတွေကို Access ရမယ်ဆိုတာကအစ စိတ်ကြိုက်စီစဥ်နိုင်မှာ ဖြစ်သလို Product တွေ SKU တွေကိုလဲ Unlimited ထည့်နိုင် ၊ ရောင်းချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
© Copyright 2022 MM Digital Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.